Siyaasadda Qarsoonnimada - "Nidaamka Baradhada" Magazine
Bogga guriga Siyaasadda Asturnaanta
Siyaasadda khaaska ah ayaa qeexaysa shuruudaha iyo ujeedooyinka ururinta, kaydinta, ilaalinta, habaynta iyo qaybinta macluumaadka ku saabsan isticmaalayaasha ilaha potatosystem.ru. Markaad iska diiwaan geliso website-ka potatosystem.ru, waxaad si toos ah u xaqiijinaysaa aqbalaadda siyaasaddan khaaska ah.
Ururinta iyo isticmaalka macluumaadka gaarka ah
Isticmaalayaashu waxay siiyan potatosystem.ru macluumaadkooda gaarka ah ilaa inta la codsado. potatosystem.ru waxay ka ururisaa macluumaadka shakhsiyeed isticmaalayaasha si ikhtiyaari ah. Isticmaaluhu wuxuu oggolaadaa xaqiijinta xogtiisa gaarka ah ee dhexdhexaadiyaha.
Macluumaadka shakhsiyeed ee la codsaday waxaa ku jira magaca koowaad, magaca dambe iyo ciwaanka iimaylka. Xaaladaha qaarkood, potatosystem.ru ayaa laga yaabaa inay codsato macluumaadka ku saabsan magaca, nooca waxqabadka shirkadda uu isticmaaluhu ka shaqeeyo, iyo booskiisa.
Isticmaalayaasha bixiyay xogta gaarka ah waxay xaqiijinayaan ogolaanshahooda isticmaalkooda si ay ugu wargeliyaan wax ku saabsan alaabada iyo adeegyada cusub ee joornaalka Nidaamka Baradhada.
potatosystem.ru waxay ballan qaadaysaa inay qaaddo dhammaan tillaabooyinka macquulka ah si ay uga ilaaliso macluumaadka shakhsiyeed ee isticmaalaha burburinta, qallooca ama siidaynta.
Siidaynta macluumaadka la helay qolo saddexaad
potatosystem.ru waxay xaq u leedahay inay u wareejiso macluumaadka shakhsiyeed ee ku saabsan isticmaalaha dhinacyo saddexaad haddii tan looga baahan yahay Ruushka, sharciga caalamiga ah iyo / ama mas'uuliyiinta si waafaqsan nidaamka sharciga ah.
Helitaanka macluumaadka gaarka ah iyo cusbooneysiinteeda
Sida waafaqsan Sharciga Federaalka ee Ruushka No. 152-FZ "On Xogta Shakhsi ahaaneed", dhammaan macluumaadka la ururiyo, la kaydiyo oo la farsameeyo ee ku saabsan isticmaalayaasha waxaa loo arkaa inay xaddidan yihiin helitaanka macluumaadka, haddii aan si kale loo bixin sharciga Federaalka Ruushka. Isticmaaluhu wuxuu codsan karaa tirtirka, sixitaanka ama xaqiijinta xogtiisa gaarka ah isagoo:
ka dirida codsi e-mailka ah ee loo cayimay diiwaangelinta isticmaaluhu;
u diraya warqad xafiiska tifaftirka leh caddayn si loo aqoonsado isticmaale.
Mareegtu waxa ay ka koobnaan kartaa isku xidhka goobo kale. potatosystem.ru mas'uul kama aha waxa ku jira, tayada ama siyaasadaha amniga ee goobahan. Dukumeentigan (Siyaasadda Qarsoonnimada) waxa ay khusaysaa oo keliya macluumaadka si toos ah loogu dhejiyay goobta.
Isbeddelka Siyaasadda Qarsoonnimada
Maamulka goobta ayaa xaq u leh inuu keligiis ku sameeyo isbedel kasta oo lagama maarmaanka ah Siyaasadda Qarsoonnimada. potatosystem.ru waxay ballan qaadaysaa inay ku wargeliso isticmaaleyaasha shabakadda potatosystem.ru isbeddellada la qorsheeyay ugu yaraan 7 maalmood ka hor inta aan la dhaqangelin isbeddelladan. Adigoo sii wada isticmaalka goobta potatosystem.ru ka dib isbeddelada ayaa dhaqan gala, isticmaaluhu wuxuu sidaas ku xaqiijinayaa aqbalaadiisa.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto ogeysiiskan, fadlan nagala soo xidhiidh: 8 910 870 61 83 ama su'aashaada iimayl ugu dir: maksaevaov@agrotradesystem.ru